दाङमा क्षेत्रीय नेतृत्व चुन्न मतदान : ९८ प्रतिशत मत खस्यो – lattest News
दाङमा क्षेत्रीय नेतृत्व चुन्न मतदान : ९८ प्रतिशत मत खस्यो
नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय नेतृत्व छनोटका लागि दाङमा मतदान भएको छ । जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्रको नेतृत्वका लागि मंगलबार मतदान भएको हो । मतपरिणाम भने बुधबार बिहानसम्ममा आउने आकलन गरिएको छ ।
मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । मंगलबार भएको निर्वाचनमा कूल मतदाताको ९८ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन अधिकृत युवराज बस्नेतले बताए ।
दाङ क्षेत्र नं. १, २ र ३ मा कूल २ हजार एक सय ९३ मतदाता (क्षेत्रीय प्रतिनिधि) रहेका थिए । जसमध्ये २ हजार १ सय ७१ मत अर्थात् ९८ प्रतिशत मत खसेको छ । समितिका अनुसार क्षेत्र नं. १ मा ६ सय ९५ मतमध्ये ६ सय ८५ मत खसेको छ । यस्तै क्षेत्र नं २ मा ६सय ५१ मतमध्ये ६ सय ४० मत खसेको छ । भने क्षेत्र नं. ३ मा ८ सय ४७ मध्ये ८सय ४४ मत खसेको छ ।
तीन वटै क्षेत्रको मतदान शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको छ । मत परिणाम बुधबार दिउँसोसम्म सार्वजनिक भइसक्ने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । यो समाचार तयार पार्दा सम्म जिल्लाका तीन वटै क्षेत्रमा मतगणना सुरु भइसकेको छ । मङ्गलबार सम्पन्न निर्वाचनले क्षेत्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नेछ ।
दाङका तीन क्षेत्रबाट ७ जनाले नेतृत्वको लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । क्षेत्र नं १ र २मा दुई समूहले प्यानल सहित नेतृत्व दाबी गरे पनि क्षेत्र नं ३ मा भने तीन समूहले नेतृत्वको दाबी रहेको छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा सभापतिसहित सचिव, सहसचिव, सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उपसभापति पदमा प्रदेश सभाका सभापति पदेन रहने व्यवस्था रहेको छ ।
दाङको क्षेत्र नम्बर १ मा सभापति पदका लागि भेषराज पाण्डे र सर्वजीत डिसी चुनावी मैदानमा छन् । पाण्डेको प्यानलबाट सचिव पदका लागि हरिहर शर्मा र खेम चौधरी, सहसचिव पदमा प्रकाश जिसी र गोविन्द वली छन् । डिसीको प्यानलबाट सचिवमा त्रियोगी यादव, कृष्ण चौधरी, सहसचिवमा राजेन्द्र खड्का र मीनराज अधिकारी रहेका छन् ।
क्षेत्र नम्बर २ मा सभापति पदका लागि भिमप्रकास खड्का र निर्मल डाँगीबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ । खड्काको प्यानलबाट सचिवमा हिमबहादुर डाँगी र कमल गौतम छन् भने सहसचिव पदमा रमेश कुमार पाण्डेय र रञ्जित कुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । डाँगीको प्यानलबाट सचिवमा आरके शीतल र सन्तोष योगी, सहसचिवमा शिव घिमिरे र प्रमोद पोखरेल प्रतिस्पर्धामा छन् ।
क्षेत्र नम्बर ३ मा सभापति पदका लागि जगत बहादुर खड्का, सुरेन्द्र खडका र किरण बहादुर शाह प्रतिस्पर्धामा छन् । जगतको प्यानलबाट सचिव पदमा शोभकर सापकोटा र पूर्ण बहादुर केसी सह सचिवमा भिमकान्त भट्टराई र डेफुलाल चौधरी तथा सुरेन्द्रको प्यानलमा सचिव पदमा रबी बुढाथोकी र भेषराज डाँगी,सहसचिव पदमा तनोज सिंह वली र भूपबहादुर केसी प्रतिस्पर्धामा छन् ।